Free Nay Phone Latt: November 2008
Nay Phone Latt, the blogger and Internet café owner who has been held at the interior ministry since 29 January, has been charged under section5(J) of the Emergency Provision Act of 1950.
It provides for up to seven years’ imprisonment for anyone who “causes or intends to disrupt the morality or the behaviour ofagroup of people or the general public, or to disrupt the security or the reconstruction of stability of the union.” Adopted two years after independence, the law is often applied to journalists and writers.
07.02 - Blogger has been held in interior ministry for past week
After learning that blogger and Internet café owner Nay Phone Latt is being held in the interior ministry, Reporters Without Borders today called on the authorities to say what charges have been brought against him. Nay Phone Latt was arrested on 29 January together with several members of the opposition National League for Democracy (NLD).
“The military regime shows no mercy to bloggers because they areavital source of information about conditions inside Burma,” the press freedom organisation said. “Last autumn’s Internet blackout already showed us to what degree the Internet isapolitical tool that must be preserved at all cost.”
Three NLD members who were freed after being questioned for four days - Thi Han, Nyi Nyi Min and Htein Win - told the international media on4February that they saw Nay Phone Latt in the interior ministry but were unable to talk to him. They know nothing at all about the conditions in which he is being held. His family fears he may have been tortured or mistreated.
29.01 - Blogger arrested as regime steps up online surveillance
Reporters Without Borders and the Burma Media Association firmly condemn the arrest of blogger and writer Nay Phone Latt yesterday at his home in the Rangoon district of Thingankyun.
“This hounding of bloggers is unacceptable,” the two organisations said. “We do not know where Nay Phone Latt is being held. We urge the authorities to release him and to stop this persecution.”
A member of the outlawed National League for Democracy, Nay Phone Latt uses his blog (http://www.nayphonelatt.net/) to record the difficulties encountered by young Burmese when trying to express themselves, especially since last autumn’s protests against the military regime that were led by Buddhist monks. He also owns three Internet Cafés in Burma and one of them is located in Thingankyun.
(ဤသတင်းကို http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25274မှ ရယူသည်။)
YANGON: Myanmar's best-known blogger who was arrested after massive anti-junta protests last year has been jailed for 20 years.
Nay Phone Latt, 28,aformer member of detained democracy leader Aung San Suu Kyi's opposition National League for Democracy (NLD) party, was among more thanadozen anti-government activists who were jailed this week.
Nay Phone Latt was sentenced on Monday along with poet Saw Wai, who is accused of penningasecret anti-junta message in one of his works.
Four NLD members were also given unspecified jail terms on Monday whileacourt in Yangon's notorious Insein Prison sentenced 14 members of well-known pro-democracy group the 88 Generation Students to 65 years imprisonment each.
'Nay Phone Latt was once an NLD youth member, but he left the party when he was arrested. He was sentenced to 20 years imprisonment,' NLD spokesman Nyan Win told AFP yesterday.
'The authorities are punishing the activists by investigating the cases hurriedly. There was not enough time foradefence with lawyers.'
Saw Wai was sentenced to two years in prison for defaming the state inapoem that referred to junta leader Than Shwe, Mr Nyan Win said.
Myanmar's military censors launched an investigation in January afterapoem by Saw Wai appeared inanewspaper. The work read likealove letter, but the first character in each word spelt 'Senior General Than Shwe is power crazy'.
Paris-based media watchdog Reporters Without Borders and Myanmar group the Burma Media Association condemned the severity of the blogger's punishment.
'This shocking sentence is meant to terrify those who go online in an attempt to elude the dictatorship's ubiquitous control of news and information, and we call for his immediate release,' they said inajoint statement.
'Saw Wai, for his part, is being made to pay for his impertinence and courage asacommitted poet.'
Nay Phone Latt's blog was written in the Myanmar language and in the style ofanovel. He used it asaforum to discuss the difficulties of daily life, such as the regular power outages and the rising cost of living.
The blog was banned by Myanmar's military regime, and Nay Phone Latt was arrested in January duringaround-up of activists linked to the massive anti-junta protests in September last year.
About 200 NLD members and activists were arrested during and after the protests, when up to 100,000 people spilled onto Yangon's streets.
(copy from http://www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/SE%2BAsia/Story/STIStory_301306.html)
အောင်ပွဲခံသူခံ လဲကျသူကျနဲ့ ငရဲခန်းနဲ့အနှိပ်ခန်း အနှစ်နှစ်ဆယ်စာထပ်ခြားနား
ဖန်တရာတေနေဦးမဲ့ အတိတ်ကကဲ့သို့သော အနှစ်နှစ်ဆယ်
ဒီမယ်ဟေ့လူ .... နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ် ခင်ဗျားရောဘာဖြစ်နေမယ်ထင်လဲ
တစ်ခုတော့ရှိတယ် မွေးရပ်မြေလေးသွားမချစ်လိုက်လေနဲ့ ဒါကအနှစ်နှစ်ဆယ်
အို..ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာ... ခင်ဗျား ဗွီဒီယိုစိတ်ဝင်စားလား ဒါလည်းအနှစ်နှစ်ဆယ်ပဲ။
(စာကို မစ်(စ်)သွန်းသွန်း http://missthonnthonn.blogspot.com/2008/11/blog-post_11.htmlမှ ရယူသည်)
နေဘုန်းလတ်ကို ပြစ်ဒဏ်ချပြီးတည်းက သူ့ သတင်းကို အင်တာနက် နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတယ် ။ တချို့ကမှန်တယ် ၊ တချို့က မမှန်ဘူး ။ မမှန်တာတွေ ရေးထားတာကို ဖတ်ရတိုင်း ... အနှစ်နှစ်ဆယ်စွန်း ဆိုတာကို ရင်ဆိုင်နေရသူအတွက် အမှန်အကန်အချက်အလက်တွေ ရေးပေးဖို့တော့ အားစိုက်ထုတ်သင့်ကြတယ်လို့ မြင်မိတယ် ။ တကယ်တော့ ခုလိုပြစ်မှုမျိုး ချခံရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မတို့အားလုံး လုံးဝမထင်မှတ်ခဲ့မိဖူး ။ နေဘုန်းလတ်ကိုယ်တိုင်တောင် ထင်မိခဲ့လိမ့်မယ် မထင်ဖူး ။
ကျွန်မအမြင်မှာတော့ နအဖဟာ ၂၀၁၀ မတိုင်ခင် သူတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့ သူတို့တွက် ဆူးညှောင့်ခလုတ်တွေအားလုံးကို ဖယ်ရှားဖို့ စတင်လိုက်သလိုပဲ ။ အင်တာနက်ရေစီးကြောင်းပေါ်မှာတော့ နေဘုန်းလတ်ဟာ ပထမဆုံးသော ဓါးစာခံ ဖြစ်သွားတယ် ။ နအဖဟာ သူ့ကိုသုံးပြီး တခြားသူတွေကို အနှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုတာနဲ့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်သလိုပဲ ။ ဘလောဂ့်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လိုက်မယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ အတွေးတိုင်းမှာ အဲဒီ အနှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုတာကြီး ကပ်ပါနေအောင် အကွက်ဆင်လိုက်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မအတွက်တော့ အဲဒီ အနှစ်နှစ်ဆယ်ဆိုတာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် ကောင်လေးတယောက်အတွက် ယူကျုံးမရ ဖြစ်စရာ ၊ စိတ်ထဲ ဒေါသထွက်စရာ မခံချင်စရာပဲ ။
ကျွန်မသိတဲ့ နေဘုန်းလတ်ဆိုတာ အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ၊ လွတ်လပ်မှုကို ခုံမင်တဲ့ ၊ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ သာမန်လူငယ်တယောက်ပဲ ။ သူဟာ ပရဟိတတွေဘက်မှာလည်း အားကြိုးမာန်တက် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လေးစားစရာ လူငယ်တယောက်လည်း ဖြစ်တယ် ။ သူ့အတွေးတွေထဲမှာ သူချစ်တဲ့ စာပေအနုပညာ ဓါတ်ပုံပညာတွေလည်း စီးဆင်းနေတယ် ။ သူဟာ လူငယ်တယောက်လိုလဲ လူငယ်စိတ်နဲ့ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ နေထိုင် သွားလာတတ်တယ် ။ သူ့ဘလောဂ့်တွေကို သူနှစ်သက်တဲ့ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့ ဖန်ဆင်းထားတယ် ။ သူဟာ ကျွန်မ ခင်မင်ယုံကြည်မိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တယောက်ဖြစ်တယ် ။
နေဘုန်းလတ်ကို ကျွန်မတို့ သိကြတယ် ။ သူ့အတွက် ခံစားကြရတယ် ။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့မသိတဲ့လူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင် ဒီလို ယုတ္တိမရှိတဲ့ ဂဏန်းတွေထဲ အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ခုတ်ထဲကရေ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီလဲ ... ဘယ်အထိ ဖြစ်ရဦးမလဲ ဆိုတာ ကျွန်မတို့စဉ်းစားဖို့ အချိန်တန်ပြီ ထင်ပါတယ် ။
(စာကိုဂျစ်တူး http://gyittu.blogspot.com/2008/11/blog-post_12.html မှ ရယူသည်။)
ဒါဟာ ကလီရှေးဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်
ဟိုနားဒီနား လျှောက်သွားနေတဲ့ ဝေါဟာရ
ဒါပေမယ့် ရွေးချယ်စရာက မရှိတော့ဘူး
ရှေ့မှာ အနှစ်နှစ်ဆယ်စာကြီးက ပက်လက်မျောနေတယ်
နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လည်း မျောခဲ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ပဲ
အနှစ်နှစ်ဆယ်ထောင်ချောက်ထဲမှာ အနှစ်နှစ်ဆယ်တေးတွေပဲ တီးကြဆိုကြ
အနှစ်နှစ်ဆယ်ကိုရင်းပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို ဖဲ့ထုတ်ဖို့တဲ့
သို့ဖြစ်လေရာ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျုပ်တို့ စကားတစ်ခွန်းလောက် ပြောလိုက်တိုင်းမှာ
အနှစ်နှစ်ဆယ်စာ တန်နေတာ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့ …။
(စာကို ပန်ဒိုရာ http://pandora-and-pandora.blogspot.com/2008/11/blog-post_11.htmlမှ ရယူသည်။)
နိုဝင်ဘာ ၁၀။ HT
စာရေးဆရာ ဘလော့ဂါတစ်ဦးဖြစ်သူ နေဘုန်းလတ် (၂၈ နှစ်)ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)အရ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်၊ ၃၂ (ခ)။ ၃၆ အရ ထောင် နှစ်နှစ်ခြောက်လ၊
အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း ပုဒ်မအရ ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်၊ စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် ၂၀ နှစ် ခြောက်လ ယနေ့ချလိုက်သည်။ ရုံးချိန်းသို့ အသင့်ရောက်ရှိလာ
သော မိသားစုကို ကြားနာခွင့် မပေးဘဲ စီရင်ချက် ချပြီးမှ လှမ်းပြောခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုနေဘုန်းလတ်ကို မိခင်နှင့် မိသားစုက လုံးဝ မတွေ့ခံကြောင်း
မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ပြောပြသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ အခြားသူများနှင့် အတူမထားဘဲ သီးခြားခွဲပြီး ချုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကိုနေဘုန်းလတ်နှင့်အတူ အဖမ်းခံရသည့် မသင်းဂျူလိုင်ကျော် (ဖိုးမူ)ကို ထောင်နှစ်နှစ်နှင့် ခြောက်လ ချလိုက်သည်။ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ
တရားသူကြီး ဒေါ်စောဥာဏ်ကို အင်းစိန်ထောင်ဝင်း အတွင်းရှိ အထူးတရားရုံးတွင် တံခါးပိတ် စီရင်ချက် ချမှတ်စေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုံးချိန်းကို ကြိုတင်
သိရှိပြီး ရောက်ရှိလာသော မိသားစုမှာ အထဲမဝင်ရကြောင်း သိရသည်။
ကိုနေဘုန်းလတ်သည် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆင်း အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် အမည်ဖြင့် ဘလော့တစ်ခု
တည်ထောင်ကာ ခံစားချက် စာစုများ ရေးသားပြုစုနေသူ ဘလော့ဂါ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ စင်ကာပူ နိုင်ငံတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး
သံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး နောက် မိသားစုနှင့် အတူနေထိုင်ကာ ကိုယ်ပိုင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေစဉ် ၂၀၀၈ နှစ်ဆန်းပိုင်းက ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ယခင် သင်္ကန်းကျွန်း လူငယ်တာဝန်ခံ ဖြစ်
သည့် ကိုနေဘုန်းလတ်၏ နာမကျန်း ဖြစ်နေသော အဘိုးဖြစ်သူမှာ စီရင်ချက် မချမီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
မြန်မာပြည် မပြန်မီက စင်ကာပူ နိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော ကိုနေဘုန်းလတ် (ဓာတ်ပုံ-hittaing)
“ကျွန်တော်ဟာ အနုပညာကိုခုံမင်ရူးသွပ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ …။ နေဘုန်းလတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကဗျာတွေ၊ စာတွေရေးတယ် …။ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာ
အချို့မှာ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ စာတွေကိုတွေ့နိုင်သလို ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော် ... လေးမှာလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့အနုပညာတွေကိုခင်းဖြန့်ချပြ ထားပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင် ရုပ်ရှင်
မင်းသားအလုပ် ကလွဲလို့ ကျန်တာ အကုန်လုပ်ချင်နေတဲ့ သူဆိုတော့ အရင်ကဆို သူများကင်မရာတွေ ခဏငှားငှားပြီး ဟိုဟိုဒီဒီသွားတဲ့အခါ ဓါတ်ပုံတွေလျှောက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာလဲ
ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်မြို့တော်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်”ဟု ကိုနေဘုန်းလတ်က သူ၏ ဘလော့ profile တွင် ရေးသားခဲ့သည်။
“ဟုတ်တာလဲ မဟုတ်ဘဲ သက်သက်မဲံ လူကောင်းတစ်ယောက်ကို အမှုဆင်ချတာ အင်မတန် အောက်တန်းကျပါတယ်။ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မလုပ်အပ်တဲ့ အရာပါ။ အေးလေ သူတို့က ယဉ်
ကျေးတဲ့ သူတွေမှ မဟုတ်တာ”ဟု ရန်ကုန်မှ လူငယ်စာနယ်ဇင်းသမား တစ်ဦးက လုံခြုံရေးအရ အမည်မထုတ်ဖော်ဘဲ ပြောကြားသည်။
(သတင်းကို http://www.hittaing.org/news/11 n1.html ဤနေရာမှ ရယူပါသည်။)